Shiinaha 2019-nCOV IgGIgM Qalabka Tijaabada Degdega ah (25 adeeg) soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Realy
Tijaabada Degdega ah
Chemiluminescence Immunoassay Falanqeeyaha
Waxqabadka qanjirka 'thyroid'
Dheef-shiid kiimikaadka lafta
Imtixaan Caafimaad qaba
2019-nCOV IgGIgM Tijaabada Degdega ah ...
Imtixaanka Tirada ee POCT ...
2019-nCOV IgGIgM Qalabka Tijaabada Degdega ah (25 jeer)
Xasaasiyadda iyo Khaaska ah: Qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan '2019-nCOV / COVID-19 IgG / IgM Rapid Test' ayaa la barbardhigay tijaabada ganacsiga 'RT-PCR' ee hormuudka ah iyadoo la adeegsanayo tijaabooyin caafimaad. Natiijooyinka ayaa muujinaya in 2019-nCoV / COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Qalabku wuxuu leeyahay xasaasiyad sare iyo gaar ahaaneed.
Habka RT-PCR Wadarta Natiijooyinka
2019-nCOV IgG / IgM Qalabka Tijaabada Degdega ah Natiijooyinka Wanaagsan Taban
Wanaagsan 233 2 235
Taban 35 287 322
Wadarta Natiijooyinka 268 289 557
Xasaasiyadda Qaraabada: 233/268 = 86.94% (95% CI *: 82.35% -90.49%)
Muhiimadda Qaraabada: 287/289 = 99.31% (95% CI *: 97.52% -99.92%)
Saxnimada: 520/557 = 93.36% (95% CI *: 90.96% -95.16%)
* Kala-noqoshada kalsoonida
Wanaagsan 223 7 230
Taban 45 282 327
Xasaasiyadda Qaraabada: 223/268 = 83.21% (95% CI *: 78.19% -87.48%)
Muhiimadda Qaraabada: 282/289 = 97.58% (95% CI *: 95.07% -99.02%)
Saxnimada: 505/557 = 90.66% (95% CI *: 87.94% -92.95%)
MADAXA: Xirmadaani waxay isticmaashaa difaaca jirka Kaarka tijaabada wuxuu ka kooban yahay: 1) Dahabka coloidal-sumadda recombinant-ka cusub ee coronavirus antigen iyo calaamadaha dahabiga ee ka hortagga tayada ee tayada leh; 2) laba xariiq oo lagu baaro (khadadka IgG iyo IgM) iyo hal xarriiqda tayada (Khadka). Khadka loo yaqaan 'IgM line' wuxuu la dhaqaaqi doonaa monoclonal anti-human IgM antibody si loo ogaado sheeko cusub oo loo yaqaan 'coronavirus IgM antibody'; khadka IgG waxaa lagu xayiray reagent si loo ogaado antibiyootikada IgG antibody cusub; Khadka C waxaa lagu dhaqaajin doonaa antibody-ka xakamaynta tayada.Marka qaddarka ku habboon ee muunadda tijaabada lagu daro godka muunadda kaarka tijaabada, muunadda ayaa horay loogu sii socon doonaa iyadoo la raacayo kaarka tijaabada iyadoo la adeegsanayo falka garka. wuxuu ka kooban yahay antiboone IgM ah, antibody-ku wuxuu ku xirnaan doonaa joornaalka loo yaqaan 'coloidal' ee loo yaqaan 'coronavirus antigen' cusub. Dhismaha difaaca jirka waxaa soo qaban doona anti-bini-aadanka IgM antibody oo ku dhaqdhaqaaqi doona xuubka si uu u sameeyo xarig IgM-guduud ah, oo muujinaya in sheeko cusub ee coronavirus IgM antibody ay tahay mid wanaagsan. Haddii tijaabada ay ku jirto IgG antibody, antibody ayaa ku xirnaan doonta kiniinka cusub ee loo yaqaan 'colcoidal' ee loo yaqaan 'novelcoronavirus antigen', iyo dhismaha difaaca ayaa lagu qabsan doonaa reagent oo ku dhaqaaqi doona xuubka si loo sameeyo xarig IgG-guduud-casaan ah, taas oo muujinaysa in sheeko cusub ee coronavirus IgG antibody ay tahay mid wanaagsan. Haddii tijaabada IgG iyo IgM aan midab lahayn , Natiijo taban ayaa la soo saaray.Kaadhka tijaabada sidoo kale wuxuu ka kooban yahay xariiq xakamaynta tayada C. Khadka xakamaynta tayada fuchsia C waa inuu muuqdaa iyadoo aan loo eegin haddii khadka tijaabada u muuqdo. Khadadka xakamaynta tayada ayaa ah midab midab ah oo ka kooban tayada tayada unugyada difaaca jirka. Haddii laynka xakamaynta tayada ee C aanu muuqan, natiijada baaristu waa mid aan ansax ahayn, oo muunadda loo baahan yahay in markale lagu tijaabiyo kaar kale oo tijaabo ah.
Waa tan waxa aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u sameyso imtixaanka:
1. Farta ku nadiifi suufka alkolada.
2.Functure isku mid ah farta farta si farta dhiigga looga qaado.
3.Si aad u siidaysid daboolka irbadda u leexo dhinaca fallaadhaha ee dhinaca dambe.
4. U isticmaal mashiinka dhibcaha si uu u soo qaado dhiig si aad u dalbato cajaladda.
5. Hubso calaamadaha cajaladda 10mins mar dambe si aad u aragto natiijada.
Coronavirus (CoV) wuxuu ka tirsan yahay genus Nestovirus, Coronaviridae, wuxuuna u kala baxaa seddex hiddo oo kala ah: α, γ, iyo γ genus α iyo β ayaa kaliya cuduro ku keenaya naasleyda. Genus γ badanaa wuxuu sababa infekshinka shimbiraha. xiriir toos ah dheecaanka ama loo maro aerosol iyo dhibco. Waxaa sidoo kale jira cadeymo muujinaya in lagu kala qaado marinka saxarada-afka.
Illaa iyo hadda, waxaa jira 7 nooc oo loo yaqaan 'coronavirus human' (HCoV) oo sababa cudurrada neefsashada ee aadanaha: HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, MERS-CoV iyo sheeko-roodhida cusub (2019), waa cudurada neef mareenka ee cudurada neef mareenka, iyaga waxaa ka mid ah, cudurka loo yaqaan 'coronavirus virus' (2019) oo la ogaaday sanadka 2019. ifafaalaha caafimaad waa astaamo nidaamsan sida qandho iyo daal, waxaa wehliya qufac qalalan iyo dyspnea, iwm. oof wareen, neefsashada oo shaqeysa, iyo neefsashada ba'an.Dressress syndrome, septic shock, xubno badan oo jirka ku dhaca, cilladaha dheef-shiid kiimikaad hooseeya ee daran, iwm xitaa nafta halis gelinaya.
2019-nCOV / COVID-19 IgG / IgM Rapid Test Device waa tallaal kromatografi dhaqso leh oo loogu talagalay ogaanshaha tayada ee IgG & IgM antibody ee Cudurka Coronavirus 2019 ee dhiigga aadanaha oo dhan, serum, ama plasma sida caawimaad loogu helo baaritaanka cudurada COVID-19 .
Hore: 2019-nCOV IgGIgM Qalabka Tijaabada Degdega ah (hal adeeg)
Xiga: COVID-19 (SARS-Cov-2) Antibody IgG / IgM Qalabka Tijaabada Degdega ah
2019-nCOV IgGIgM Tijaabada Degdega ah
baaritaanka degdega ah ee coronavirus
coronavirus tijaabinta degdegga ah ee isticmaalka aadanaha
xirmooyinka tijaabada coronavirus
baaritaanka degdega ah ee bini'aadamka ee loo yaqaan 'coronavirus'
baaritaanka bini'aadamka ee loo yaqaan 'coronavirus test'
IgGIgM Tijaabada Degdega ah
IgGIgM Qalabka Tijaabada Degdega ah
xirmada tijaabada noval coronavirus
xirmada tijaabada cusub ee coronavirus
Strep Tijaabooyin Deg Deg Ah
Giardia Lamblia Kasetka Imtixaanka Degdega ah
Hargab A + B Tijaabooyin Deg Deg Ah
HCV / HIV / Syphilis Combo Degdeg ah
Tijaabooyinka Degdega ah ee Tiifowga ah
2019-nCOV IgGIgM Qalabka Tijaabada Degdega ah (hal adeeg)
TalooyinAlaabada KululKhariidadda boggaAMP Mobile
Ku saabsan Realytech